Ciidamada Amaanka oo Muqdisho ku qabtay rag katirsan Al Shabaab – Somali Top News
Ciidamada Amaanka oo Muqdisho ku qabtay rag katirsan Al Shabaab
(STN-MUQDISHO):_ Ciidamada Amniga ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay Degmada Wadajir ee Gobolka Banaadir ,waxaana ay gacanta ku soo dhigeen laba ka tirsan Alshabaab. sida uu sheegay Taliska NISA.
Warkan ka soo baxay Taliska Hay’adda Sirdoonka iyo Nabad-sugidda Qaranka ee NISA ayaa lagu sheegay in howlgalkan uu dhacay habeen hore Kaas oo ahaa mid lagu sugayay Nabad-galyada Shacabka, Islamarkaana ay Ciidanka amniga gacanta ku soo dhigeen labadaasi ka tirsan Al-Shabaab.
Todobaadkii la soo dhaafay ayaa Nabadsugida Soomaaliya waxa ay sheegtay in degmada Yaaqshiid laga soo qabtay Nin ka tirsanaa Al-Shabaab,isla markaana ku howlanaa dilalka iyo qaraxyada sida ay hadalka u dhigeen.
Magaalada Muqdisho iyo qaar kamid ah Gobolada Dalka waxaa ka socda Howlgalo ay wadaan Ciidamada Amniga,waxaana ka mid ah deegaanadaas Magalada Marka ee Xarunta Gobolka Shabeellaha Hoose.
← Qorshe lagu heshiisiinayo Soomaalida iyo Oromada oo socda
Dowladda Canada oo ka hadashay sida loo maamulo lacagta ay ugu deeqdo Soomaaliya →
Gabar ku dhaawacnatay qaraxyadii xalay oo sheekooyin cajiib ah banaanka keentay
Madaxweyne Waare oo ku laabtay Jowhar kadib kulan uu Dhuusomareeb kula qaatay Ra’isul Wasaaraha